Popular News - Aarthik Sanjal
हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग मर्जर गर्न सक्ने
Reporter	माघ ६, २०७८ views
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गर्ने भनिएको मर्जरको सम्झौता तोडेपछि नयाँ पार्टनर खोज्न थालेको छ । यस विचमा विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुसँग कुरा भइरहेको सो बैंक स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समयमा विशेषगरी हिमालयन बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू...
Reporter	वैशाख १८, २०७९ views
काठमाडौँ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । आज आइतबार आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४.८४ रुपैयाँले बढेर १८३ रुपैयाँ २ पैसा पुगेको छ । यस्तै, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर...
Reporter	वैशाख २१, २०७९ views
काठमाडौं । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले आज वैशाख २१ गते बुधबारदेखि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा २२ लाख इकाई ऋणपत्र जारी गरेकोे हो । यसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात्...
Reporter	जेठ ५, २०७९ views
काठमाडौं । नबिल बैंक लि.र नेपाल बंगलादेश बैंक लि. बीचको प्राप्ति सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंक लि. का संस्थापक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मर्जर सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिएका छन। एनबि समूहको कम्पनी दिवेश्वरी ईन्भेष्टमेण्ट...
Reporter	वैशाख २०, २०७९ views
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको लाभांश नरोक्न उच्च अदालत पाटनले निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा लगाएको रोक तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएको हो । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमन्ट बैंकको मर्जर भाँडिएसँगै राष्ट्र बैंकले लाभांश...
नेवार समुदायमा आज धुमधामका साथ योमरी पुन्ही मनाइँदै
Reporter	पुस ४, २०७८ views
काठमाडौँ । मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाबाट अन्यत्र बसाइँ सरेका आदिवासी ज्यापू समुदायले ज्यापू दिवस मनाउँदै छन् । नयाँ चामलको पीठोभित्र चाकु बफ्याएर बनाइने मौलिक शैलीको मिठाई योमरी खाने दिनका रूपमा पनि यो दिनलाई लिइन्छ । काठमाडौँ...
नेपाल वायुसेवा निगमको सिड्नीदेखि लण्डनसम्म उडान भर्ने नयाँ योजना
Reporter	पुस ९, २०७८ views
काठमाडौं। राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा कम्पनी 'नेपाल वायुसेवा निगम' (नेपाल एयरलाइन्स) ले कोभिड–१९ महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सन्तोषजनक व्यापार गरेको पाइएको छ । निगमले सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा २५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको तथ्यांक रहेको छ । महामारीका...
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रतिलिटर ३ रूपैयाँले बढयो
Reporter	माघ ५, २०७८ views
काठमाडौं। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आज राती १२ बजेबाट लागू हुने गरि पुनः बढाएको छ । निगमले पेट्रोल, मट्टितेल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसारको घाटा समायोजनका लागि...
सेबोनको पाइपलाइनमा ७ कम्पनीका हकप्रद अनुमति
Reporter	मंसिर १८, २०७८ views
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पाइपलाइनमा ७ वटा कम्पनीका हकप्रद स्वीकृतिका फाइल रहेका छन्। सेबोनको पाइपलाइनमा २ वटा बीमा कम्पनी , २ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी , २ वटा फाइनान्स कम्पनी र एउटा विकास बैंकको हकप्रद रहेका छन्। यी...
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३५ प्रतिशत मुनाफा सरकारलाई लगानीकर्तालाई बोनसको कागजको खोस्टो मात्र
Reporter	कात्तिक २५, २०७८ views
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सरकारलाई २७ अर्ब ५९ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाएका थिए । बैंकहरुले गरेको नाफाबाट सो नाफाको ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दा सरकारले सो बराबरको राजस्व पाएको थियो...
वाणिज्य बैंकवित्तीय संस्था
नबिल बैंकद्वारा पुस ३० गते ३७ औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान, पुस १६ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंक लि. ले आफ्नो ३७ औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको जनाएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको पुस ८ गते बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारण सभा यही...
निक्षेप थपिने क्रम सुस्ताएपछि वाणिज्य बैङ्कले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण
Reporter	चैत ६, २०७८ views
काठमाडौँ । निक्षेप थपिने क्रम सुस्ताएपछि वाणिज्य बैङ्कले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । कर्जा लगानी घट्दा निक्षेप भने बढी देखिएको छ । वाणिज्य बैङ्कले माघ र फागुन दुई महिनाको तथ्याङ्कमा समग्र कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउँदा २१ अर्ब रुपियाँभन्दा...